January 2019 – Myanmar Peace Monitor
The 1st Nepal Media Forum for Peace Journalism held in Katmandu: Responsible Media in Peace-Building
On 19th of January, the 1st Nepal media peace forum entitled “Voice of Press Media Forum in Nepal for Peace Journalism: Peace Initiative (PI)” was held with the participation of 18 Nepalese journalists in Katmandu, Nepal. The forum was organized
Staff January 31, 2019 Partner No Comments Read more
ရာဘာခြံမှ ဗုံးသီးဟောင်းတစ်လုံး ကောက်ယူပစ်ချမိသူ အမှုဖွင့်အရေးယူခံရ
မွန်ပြည်နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ဝဲကလိကျေးရွာနေ ရန်နိုင်အောင် (အသက် ၁၉ နှစ်) သည် ရာဘာခြံအတွင်း မော်တာဗုံးသီးဟောင်းတစ်လုံးတွေ့ရှိသည်ကို သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများနှင့် နယ်မြေရဲစခန်းများကို အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ ကောက်ယူပစ်ချခဲ့ရာမှ ပေါက်ကွဲခဲ့သဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားကြောင်း သံဖြူဇရပ်မြို့မ ရဲစခန်းမှသိရသည်။
Staff January 29, 2019 News No Comments Read more
ကချင်ပြည်နယ်အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် အစည်းအဝေးမပြီးဆုံးဘဲ ရုပ်သိမ်းလိုက်ရ
လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို သီးခြားခွဲထုတ်မည့်ကိစ္စ ပါဝင်သော ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် အစည်းအဝေးမပြီးဆုံးမီ ရုပ်သိမ်းလိုက်ရပါသည်။
Peace Commission Chairman meets Chinese Asian Affairs Special Envoy AA attacks mark ‘dangerous shift’ in Rakhine, warns ICG The Myanmar Military’s Loose Lips: Gaffe or Gambit? Military Gives EAOs until Feb. 12 to Cease Operating Outside Their Areas Int’l Crisis
Staff January 28, 2019 January 28, 2019 Peace related news headline No Comments Read more
Staff January 28, 2019 February 1, 2019 News No Comments Read more